Xhumana Nathi - Gemological Institute of Cambodia
Umgwaqo Wemakethe Yasebusuku, i-Siem Reap, eCambodia
Ungase oda isitifiketi uma ungeza into enqoleni yakho. Ukuze wenze lokhu, chofoza isixhumanisi "engeza isitifiketi se-gem sale nto" ekhasini nto imininingwane ngaphezu "Engeza ekalishini" inkinobho. Lokhu kuyovula ongakhetha isitifiketi.
Wonke amatshe ayigugu avela ku-GEMIC ayigugu lemvelo elenziwe nguMhlaba. Asisebenzisi "amagugu" enziwe noma elenziwe elebhu.
Izinketho nezinqubomgomo zokukhokha
Uma usulungele ukuhlola:
Chofoza "qhubeka u-checkout" bese ufaka ikheli lakho lokuthumela.
Khetha indlela yakho yokukhokha bese uchofoza "ukhokhe manje".
I-GEMIC izokhokhisa kuphela inani elibonisiwe. Noma yiziphi izimali ezingeziwe zisekelwe kuphela kuma-PayPal's, ikhadi lakho lesikweletu elikhipha izinqubomgomo zebhange noma ze-Western Union.
Uma unezinkinga ngokukhokha noma ungathanda ukuxoxa ngezinye izinketho zokukhokha, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
I-Express Shipping - USD 35
Onke amaphakheji avela ku-GEMIC afaka i-invoyisi ephelele. Sicela uxhumane nathi ngaphambi kokufaka i-oda lakho uma udinga i-invoyisi eyenziwe ngokwezifiso noma awunayo i-invoyisi nhlobo.
Isilinganiso sokucaca kwetshe eliyigugu
IF : Hamba uhlanzekile - ungenasici ngaphakathi; mahhala iziqu.
VVS : Cishe i-loupe ihlanzekile - kakhulu, okuncane kakhulu okufakiwe; ukufakiwe akubonwanga ngaphansi kokuphakanyiswa kwe-10x.
VS : I-Eye ihlanzekile - ukungena okuncane kakhulu; Ukungena okuncane kungabonwa ngeso eliqeqeshwe noma ngaphansi kwe-10x ukukhuliswa.
SI : Okufakwe kancane - ukungena okuncane kungabonwa ngeso elimele.
I : Kuhlanganisiwe - ukungabonakali kungabonwa ngeso lengqondo.